Farsamada gacanta - Birta Badge
Sumadda birta: marka la soo koobo, waa astaan ​​lagu xardho jirka si loo muujiyo aqoonsi, shaqo iyo sharaf. Diiwaanka rasmiga ah ee calaamaddu wuxuu ka yimid Shiinaha. Waxaa lagu duubay istiraatiijiyadda Dalalka Dagaalyahannada ah, Qi CE I: “Qin wuxuu iska dhigay sidii uu u weerari lahaa Qi oo ay wehliyaan Han iyo Wei. Zhang Zijiang, ergayga King Wei o ...
Ku soo dhawow 2021 iyo Sannad Cusub oo Wanaagsan Dhamaan Asxaabta!
2020 wuxuu ahaa sanad aad u adag dadka intiisa badan, dadka aduunka oo dhan dhib badan ayaa kasoo gaadhay Covid-19 dartii. Waxaan aad uga xunahay kuwa aan ka badbaadin cudurkan faafa, ayaandarradoodu waa masiibooyinka aadanaha oo dhan. Waxaan rajeyneynaa in dadka waddammada oo dhami ay u midoobi karaan hal sidii looga adkaan lahaa cudurka ...
Hambalyo diiran warshaddeena oo helaysa Shahaadada Alaab-qeybiyaha ee TUVRheinland
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah marinnada muhiimka ah ee ganacsiga caalamiga ah, Alibaba Global Site waxay soo jiidataa inta badan ilaha macaamiisha adduunka waxayna siisaa macluumaad badan oo alaab-qeybiyeyaal ah. Si loo ballaariyo suuqa loona xoojiyo ilaha macaamiisha jira ee aan hayno, shirkadeena esta ...
Cinwaanka: H3 Wadada, Saldhiga Warshadaha Nalalka ee Lutian Industrial Park, Degmada Poyang, Shangrao City, Gobolka Jiangxi, 333110 CN.